Jose Mourinho Oo Sheegay Inuu Qaadanayo Mas’uuliyada Guuldarada Real Madrid - jornalizem
Jose Mourinho Oo Sheegay Inuu Qaadanayo Mas’uuliyada Guuldarada Real Madrid
Jose Mourinho ayaa qaatay eedaha loo soo jeedinayao Real Madrid kahor kulanka adage ee Champion League ee Manchester City.
Real ayaa waxa ay si hoose ku bilaabatay horyaalka La Ligaha iyadoo hal kulan oo kaliya ay badisey afar kulan ee ay ciyaartay illaa iyo hadda.
Mourinho ayaa su’aal ka keenay hab ciyaareedkeeda qaar kamid ah ciyaaryahanadeeda kulankii ay Sevilla 1-0 ugaga badisey.
Balse isagoo Mourinho hadlay kahor shirka jaraa’id ee kulanka Talaadada ayaa aqbalay mas’uuliyada isagoo sheegay inuu yahay ninka ay tahay in uu sare u qaado kooxda Real Madrid.
Mourinho ayaa yiri: ‘Ciyaartoyda aan soo safi doono ma noqonayaan kuwo kale.mana isku dayi dooni inaan tuso ciyaaryahanada inaysan xaaladoodu wanaagsanayn.
‘Waxaan ciyaartan u qaadan doonaa inaan ka soo horjeedo koox ay ka buuxaan ciyaaryahano heerkoodu sareeyo.
‘Ma rumeysni inaan abuuray shaki. Qofka mas’uuliyada ugu weyn leh waa aniga. Marka kooxdu ay guuleysato, waan isla wada guuleysanaa . Marka guuldarada ay timaado, waa aniga kan mas’uuliyadeeda qaadayo.
‘Ciyaarta kubbada cagta waa maanta iyo berry ee ma ahan shalay, shalay waa taariiq. Ma aan awoodin inaan ciyaaroydeyda aan niyadooda meel sare gaarsiiyo taasina waa qaladkeyga.’ayuu yiri Mourinho.
Mourinho ayaa rumeysan in Manchester City ay ugu dambayntii ku guuleysan doonto Champion League haddii ay horumarka ay samaynayaan ay sii wadaan.
Jose Mourinho oo kooxdiisu ay Talaadada la ciyaareyso City ayaa isla barbar dhigey maalgelintii uu kooxda ku sameeyey Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan tan iyo markii uu iibsaday kooxda 2008dii tii uu ku sameeyey Roman Abramovich kooxda Chelsea.
Waxana uu yiri: ‘Uma malaynayo in ay ka duwan tahay Chelsea. Tan iyo markii uu Roman iibsaday kooxda. Ranieri ayaa ahaa tababarihii ugu horeeyey kadib aniga ayaa ku xigsaday, waxana aan ku guuleysanay Premier League iyo dhowr koob.
‘Carlo (Ancelotti) ayaa kadib yimid wayna sii socdeen iyagoo ugu dambayntii ku guuleystey Champions League.
Mourinho ayaa sii hadlay waxana uu ka sheekeeyey sida ay ku socoto kooxda City:
‘City waxay ku bilaabatay Mark Hughes,waxay bilaabeen inay lacag qarash gareeyeen oo ay ciyaartoy wanaagsan soo iibsadaan.
‘Kadib waxaa u yimid Roberto (Mancini) waxana uu sameeyey shaqo wanaagsan, koox wanaagsan ayuu abuuray kadibna koobkii ugu horeeyey ayay ku guuleysteen.
‘Ma garanayo haddii uu xilligan ama xilli kale Roberto ama qof kale mustaqbalka jihada ay ku socdaan City mar dhow ama mar dheerba koob waa ku guuleysan doonaan.’
Mourinho ayaa muujiyey inaysan weli kooxdiisa ka rajo dhigin La Ligaha inkastoo siddeed dhibcood ay ka horeyso Barcelona waxana uu sheegay in uu la iman doono koox adag oo niyad leh.